Korneyl IToobiyaan ah oo dhameystey 14 cisho kaaritimaanka somaliland oo ka hadley – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Korneyl IToobiyaan ah oo dhameystey 14 cisho kaaritimaanka somaliland oo ka ...
Korneyl IToobiyaan ah oo dhameystey 14 cisho kaaritimaanka somaliland oo ka hadley
Kornayl Barre Maxamuud Cumar, oo ah Sarkaal ka Tirsan Ciidanka Booliska Federaalka Ethiopia, ayaa ka mid ahaa dadka lagu karantiimay Hoteelka Royal Palace, ee Duleedka Hargeisa.
Waxaa uu iiga warramay waxyaabaha dhacay intii ay karantiimada ku jireen, taasoo ay ka mid tahay in dammaanad lagusii daayay 8 qof oo ka mid ahaa dadkii la karantiimeeyay markii ay joogeen 6 maalmood oo kaliya.
Kornayl Barre, ayaa kasoo laabtay dalka Turkiga, waxaa uu doonayay inuu Somaliland ka dego isla markaana uu dalkiisa Ethiopia ka galo Xadka Wajaale, maadaama ay Ethiopia xilligaasi soo saaartay in dadka soo dega la karantiimo 14 cisho oo ay kharashkooda isticmaalayaan.
Qorshihiisa ayuu usoo badalay madaarka Cigaal, wuxuuna la kulmay Somaliland oo soo saartay Sharciga karantiimada oo la mid ah kii Ethiopia ee uu kasoo leexday.
Xigasho: Abdishakur Dayib Mahamed